Paranormal အေဂျင်စီ - ၀ ိန်းဂန် (Ghosts of Wayne Mansion) (အပြည့်) သည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေးသည် ငါက Mac ပါ
Paranormal Agency - Wayne Mansion (Ghost of of Ghosts) (အပြည့်)၊ ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်အခမဲ့
ယရှေု Arjona Montalvo | | iOS ကို, အားကစားပြိုင်ပွဲ, Mac က App Store ကို
ဂိမ်း 'Paranormal Agency: Wayne Mansion ၏သရဲများ (အပြည့်), လုံးဝကန့်သတ်အချိန်အဘို့ဖြစ်၏ အခမဲ့ အဘယ်သူမျှမ In-app ကိုဝယ်ယူမှု။ ဒီဂိမ်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် € 6,99နှင့်လုံးဝ၌တည်ရှိ၏ စပိန်။ ဆောင်းပါး၏အဆုံးတွင်၎င်းကိုနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ထားရှိပါသည် OS X ကို လျှင်အဖြစ် iOS ကို.
ဂိမ်းထဲမှာမင်းစမ်းရမယ် သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အင်အားကြီး လူကြိုက်များရှာပုံတော်စွန့်စားမှု၏အေးဆက်လက်၌တည်၏ Paranormal အေဂျင်စီ။ ဒီဂိမ်းကမင်းကိုမြို့စွန်မှာရှိတဲ့အိမ်ကြီးတစ်ခုဆီခေါ်ဆောင်သွားတယ် နတ်ဆိုးစွဲသောရွာ။ ရွာသားများကအော်ဟစ်သံများ၊ မြို့သူမြို့သားတွေကမထင်မှတ်ပဲထွက်လာပြီးမြို့တော်ဝန်ကမင်းကိုကြိုက်တယ် သရဲ သင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အဘို့အအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ Wayne အိမ်ကြီး။ အသုံးဝင်သောအရာများကိုစုဆောင်းပြီးရှုပ်ထွေးသောပဟေlesိများကိုဖြေရှင်းရန်သင်ကဟာသလား၊ ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာ နောကျတှဲရထား သငျသညျဂိမ်းဒိုင်းနမစ်ဘယ်လိုစိတ်ကူးတစ်ခုရနိုင်အောင်ဂိမ်း၏။
စူးစမ်းလေ့လာရန်စိတ်ဝင်စားစရာမြင်ကွင်း ၁၀၀ နီးပါး။
ကျွမ်းကျင်ဖို့ထူးခြားတဲ့ minigames 12 ။
အောင်မြင်ရန် 20 နှစ်လိုဖွယ်အောင်မြင်မှုများ။
နှစ်ခု mode ကို: ပေါ့ပေါ့နှင့်ကျွမ်းကျင်သူ။
တင်ပါတယ်: 03/10/2015 ။
ဘာသာစကားတရုတ်၊ ရိုးရာတရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရုရှား။
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: G5 ဖျော်ဖြေရေး။
compatibility10.7.4-bit processor OS X 64 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်။
ကန့်သတ်ထားသောအချိန်များအတွက်အခမဲ့ download 'Paranormal အေဂျင်စီ: The Ghosts of of Wayne Mansion (အပြည့်) သည်တိုက်ရိုက်ထံမှ Mac က App Store ကိုအောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။
ဖြည့်စွက်ကာ iOS ကို ၎င်းသည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်လည်းအခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ၎င်းမှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါ အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac က App Store ကို » Paranormal Agency - Wayne Mansion (Ghost of of Ghosts) (အပြည့်)၊ ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်အခမဲ့
Titan စီမံကိန်းအတွက် Apple က BMW နှင့် Daimler တို့နှင့်ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားခဲ့သည်
အက်ပဲလ်ဟာသူ့ရဲ့ဘဏ္resultsာရေးရလဒ်ကွန်ဖရရက်ကိုAprilပြီ ၂၆ ရက်မှာပြောင်းလိုက်တယ်